Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Canada Waxay Diyaar U Tahay Inay Hirgeliso Siyaasadda Tallaalka Cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ku dhawaaqista Dowladda Kanada ee ah in shaqaalaha federaalka ee nidaamiya waaxda gaadiidka waa in si buuxda looga tallaalo COVID-19 Oktoobar 31, 2021.
Dowladda Kanada waxay ku boorisay inay sii wadato talooyinka guddigeeda la-talinta COVID-19.
Air Canada waxay u dooday oo si joogto ah u qaadatay tallaabooyin ku saleysan sayniska si macaamiisheeda iyo shaqaalaheeda loo badbaadiyo.
Air Canada waxaa ka go'an inay la shaqeyso ururrada shaqaalaha iyo dowladda Canada si loo hirgeliyo siyaasaddan cusub.
Air Canada ayaa maanta soo saartay bayaankan soo socda iyagoo ka jawaabaya ku dhawaaqista Dowladda Kanada ee ah in shaqaalaha federaalka ee nidaamiya waaxda gaadiidka ay tahay in si buuxda looga tallaalo COVID-19 Oktoobar 31, 2021.
Tan iyo bilowgii masiibada, Air Canada waxay u dooday oo si joogto ah u qaadatay tallaabooyin ku saleysan sayniska si macaamiisheeda iyo shaqaalaheeda loo badbaadiyo. Tan waxaa ka mid ahaa ku dhiirri -gelinta shaqaalaheeda inay is tallaalaan, sameynta rugaha caafimaadka goobta shaqada iyo taageeridda barnaamijyada tallaalka bulshada si tallaallada looga dhigo kuwo si ballaaran loo heli karo.
Inkastoo Air Canada wuxuu sugayaa tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan ku dhawaaqista maanta ee tallaalada khasabka ah, waa tallaabo soo dhaweyn leh oo horay loogu qaadayo tallaabooyinka sii kordhaya ee lagu ilaalinayo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha diyaaradaha, macaamiisha iyo dhammaan dadka reer Kanada.
Air Canada waxaa ka go'an inay la shaqeyso ururada shaqaalaha iyo Dowladda Kanada si loo hirgeliyo siyaasaddan cusub hab wax ku ool ah iyada oo ujeedadu tahay in la kordhiyo nabadgelyada iyo in la fududeeyo adeegsiga tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ku saleysan sayniska si waafaqsan Warbixinta Guddiga La-talinta Khubarada ee Baaritaanka iyo Baaritaanka COVID-19 ee May 5, 2021.
Gaar ahaan, dadka socotada ah, guddigu wuxuu ku taliyay: in aysan jirin baaritaan ka hor bixitaanka ee socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay; garashada in tijaabinta bixitaanka iyo imaanshahaba ay xad -dhaaf u tahay rakaabkan; iyo in tijaabooyinka antigen-ka degdegga ah ee wax-ku-oolka ah ee wax-ku-oolka ah ee hadda la heli karo ay si badbaado leh u beddeli karaan tijaabinta PCR-ga qunyar-socodka ah ee qaaliga ah ee imtixaanaadka ka hor.
Air Canada waxay sidoo kale ka go'an tahay sii wadidda horumarinta iyo adeegsiga tillaabooyinka nabdoonaanta iyo hababka cusub ee wax ku oolka ah oo ku habboon macaamiisha marka la helo. Tallaabooyinka noocan oo kale ah ayaa muhiim u ah dib -u -bilaabidda nabdoon ee warshadaha gaadiidka hawada oo, marka laga reebo awood u siinta dadka Kanada inay si xor ah u safraan, sidoo kale waa darawal muhiim u ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Kanada.